Claudia Bikini Swimsuit Pants Zezıhlabane Boy Shorts-PDF Ukuthunga Iphethini – The Tailoress
Ikhaya / Abesifazane / sezimpahla zokubhukuda / Claudia Bikini Swimsuit Pants Zezıhlabane Boy Shorts-PDF Ukuthunga Iphethini
Yakha elula ijezi ngoba begqoke izigqoko phezu sezimpahla zokubhukuda njengoba izikhindi noma sebenzisa indwangu elula lycra ezifana ukuntweza ijezi ukusetshenziswa njengoba sezimpahla zokubhukuda. They can be made lined or unlined depending on your preference.
Izigaba: nokufushane, sezimpahla zokubhukuda, Abesifazane
Sicela ubuke CLAUDIA SHORTS TUTORIAL lapha noma uchofoze ithebhu ngezansi ukuze uyivule kuleli khasi.
usayizi Copyshop: 40cm x 68cm / A4 amakhasi: 8 / US Incwadi: 8
Ungase uthande agudle izikhindi for ukuqina esengeziwe. Sebenzisa kabili indwangu efanayo noma anezikhala kanye nje kabili up izingcezu njengoba thunga.
Qala ngokuhamba ebeka izikhindi ezimbili iphethini izingcezu KWESOKUDLA izinhlangothi ndawonye.
Phina futhi awahlanganise nangemuva isikhungo ezivuzayo ndawonye.
Nquma futhi awuqede izibonelelo umphetho usebenzisa zig-zag Stitch noma Stitch overlocker.
Sebenzisa Stitch zig-zag noma ezinye elula Stitch kulo le phrojekthi. Futhi ukuqinisekisa ukusebenzisa obungangenhloko kakhanjana ijezi umshini inaliti.
Vula nangemuva ukuxhuma, Lay the FRONT and BACK crotch seam allowance RIGHT SIDES together.
pin, awahlanganise futhi awuqede izibonelelo umphetho.
Qeda izibonelelo umphetho ka ukuvuleka umlenze usebenzisa zig-zag Stitch noma overlocker.
Songa emuva izibonelelo umphetho kuvulwa umlenze ukuba baye ohlangothini olungelona futhi top-Stitch nge Zig-Zag Stitch ukuze uvikele.
Sika ubude nokunwebeka ukufanisa nese- WAISTBAND iphethini isiqeshana.
Qondanisa emifushane umphetho izibonelelo ezimbili kusukela WAISTBAND KWESOKUDLA izinhlangothi ndawonye.
Thunga futhi Ukunquma nesabelo umphetho.
Ukuze aqinisekise nokunwebeka, esikhundleni abathungela omhlophe webhola izibonelelo izinhlangothi KWESOKUDLA ndawonye, kuyendlulela eyodwa umphetho nesabelo ungene nezinye ke thunga. Lokhu kuzogwema ngobuningi ngokweqile WAISTBAND.
Songa WAISTBAND e lengthways isigamu. Qondanisa eluhlaza umphetho izibonelelo kuya ukhalo of izikhindi. Faka nokunwebeka phakathi WAISTBAND eligoqiwe.
Qondanisa umugqa umphetho we WAISTBAND emgqeni EMUVA umphetho futhi adambise lonke emhlabeni.